Ogow noocyada kala duwan ee caloosha iyo waxa ay ka soo jeedo | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Nafaqeyn
Mid ka mid ah dhibaatooyinka sida aadka ah u khuseeya qof walba oo u yimaada dhammeystirkeena waa calool xanuun. Way kala duwan yihiin noocyada caloosha iyadoo kuxiran sababaha ay uga baxaan. Caadi ahaan, calooshu waxay bilaabataa inay soo baxdo markaynaan daryeelin cuntadeena sababtoo ah ma jimicsi ku filan. Nolosha fadhiga waxay ku dartay cunto dheellitiran oo liidata taas oo dufanka ku badan yihiin, cuntada degdegga ah iyo cabitaannada fudud, ay doorbidaan muuqaalka caloosha.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noocyada kala duwan ee caloosha iyo sababta ay u muuqdaan.
1 Baruur ku uruurinta caloosha
2 Cunnooyinka saameeya noocyada kala duwan ee caloosha
3 Noocyada caloosha
3.1 Caloosha biirka
3.2 Caloosha cadaadiska
3.3 Noocyada Caloosha: Caloosha
3.4 Calool sabayn
Baruur ku uruurinta caloosha
Su’aasha aan dhamaanteen isweydiineyno waxay tahay maxey calooshu u muuqataa. Waxay kuxirantahay sababo kala duwan, tani waa sababta calooshu u muuqato. Waxyaalaha qaarkood waa hiddo-wadaha waxaana sabab u ah u janjeeridda dufanka qaybtan jirka ka mid ah. Jidh kasta dufan buu keydiyaa si ka duwan waana inaan aqbalnaa nafteena sidaan nahay. Haddii aan ka mid nahay dadka ku urura dufanka caloosha, waa inaan xoogga saarnaa xakamaynta cuntadeena iyo jimicsi joogto ah. Aan aragno noocyada dufanka ee kala duwan:
Baruurta subcutaneous: Waa mida sababta ugu weyn u ah muuqaalka michelin. Michelin-kan caloosha ku jira waa dufan subcutaneous. Waa nooc dufan ah oo lagu shubo maqaarka hoostiisa. Waa nooca dufanka ugu fudud ee lumi kara. Kaliya waa inaad sameysid hoos u dhac ku yimaada kalooriga cuntada si joogto ah waqti dheer una samee jimicsi iska caabin ah.
Baruurta visceral: waa tan ugu halista badan caafimaadka. Waa nooc dufan ah oo lagu keydiyo hareeraha xubnaha gudaha. Dufanka noocan ahi wuxuu u horseedi karaa wadnaha iyo cudurrada dheef-shiid kiimikaadka. Waa inaan xasuusnaano in WHO aysan kugula talinaynin in kabadan 102 cm oo ah guntanka caloosha ee ragga iyo 88 sentimitir ee haweenka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad mar hore dhaaftay 94 iyo 80 sentimitir wareega wareega sida ay u kala horreeyaan, waa inaad caafimaadkaaga u qaadaneysaa si dhab ah si aad u yareyso qiimayaashan.
Waa in maskaxda lagu hayaa in xawaaraha uu na sababi doono in dufanku inaga lumo si aad ah looma dedejin karo. Waxaa jira dad doonaya inay yareeyaan boqolkiiba dufankooda si dhakhso leh. Kama yeeli karno inaan baabi'inno dufanka, malaha, aan ku urursannay sannado dhowr bilood gudahood ah. Waa inaad noqotaa qof iswaafaqsan oo sameeya hoos udhaca kalooriga oo dayactiraa waqtiga.
Cunnooyinka saameeya noocyada kala duwan ee caloosha
Waxay kuxirantahay nooca caloosha aan heysano, waxaa jira cuntooyin qaar oo saameeya kuwa kale marka laga hadlayo dufanka ku urursan caloosha. Si aad u bilowdo, waxaan u baahanahay inaan wax ka ogaano nafaqada. Waxa jira cuntooyin qaar oo ay tahay inay ka mid ahaadaan cuntada iyo kuwo kale oo ay tahay inaynu cayrino. Haysashada maqnaansho xoog leh oo qeexan waxay kuxirantahay gebi ahaanba boqolkiiba dufankeena, marka laga reebo jimicsiga albaabka. Fadhiyo badan oo aan ku sameynno qolka jimicsiga, ma horumarinayno lixda xirmo ee caanka ah laakiin waxaan leenahay boqolkiiba dufan yar.
Marka aan horumarsan nahay qolka jimicsiga waxaan u baahannahay inaan tixgelinno xoogaa layliyo isku dhafan. Tani waxay ka kooban tahay ku lug lahaanshaha dhammaan caloosha xoogaa jimicsi xoog leh si loo gaaro maqaarka hufan oo soo jiidasho leh.
Waxaan eegeynaa maxay yihiin noocyada kaladuwan ee caloosha kuwa soo noqnoqda ee ka jira celceliska dadka.
Waa mid la dhawaaqo oo ka soo baxa dhamaadka sternum ilaa qaybta hoose ee caloosha. Magaca caloosha biirku wuxuu caawiyaa in laga bixiyo tilmaamo ku saabsan asalkiisa, laakiin mararka qaarkood muuqaalada ayaa noqon kara wax khiyaano leh. In kasta oo calooshan lagu yaqaan magacan, haddana wax badan kuma laha qadarka biirka lagu leeyahay. Sababta nooca caloosha aan ka hadlayno waxay aad ula xiriirtaa tubas la socda biirka. Waa inaan ogaano taas, markaan saaxiibo nahay oo aan usoo baxno biir, waxa aan sameyno waa inaan dalbo tapa iyo biirka. Cunnadan fudud waxay badanaa ku saleysan tahay cuntooyinka dufanka leh, la shiilay iyo bur aad u badan iyo khamiir. Kuwani waa maaddooyinka ugu fiican ee muuqaalka caloosha noocan ah.
Waxaas oo dhami waxay ku darayaan nolol aan fadhiyin waana kicinta caloosha beerka si ay u koraan. Beer wuxuu leeyahay kaloori faaruq ah iyo boqolkiiba khamri. Tani uma fiicna jirka maadaama ay u fasirto sun. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood biirku ma dilo qof. Waa in maanka lagu hayaa in laxanka caafimaad ee nolosha ay tahay in la ilaaliyo muddo dheer. Dooro inaadan waqti badan ku lumin fadhiisiga oo dooro cunno fudud oo caafimaad leh. Talada qof walba la siinayo ayaa ah in la yareeyo biirka ama cabitaanka kaarboonka leh iyo kuwa sonkorta leh.
Waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee caloosha leh dhexroor ka yar marka la barbar dhigo kuwii hore. Waxay caadi ahaan ka muuqataa dadka waqti yar ku haysta inay wax cunaan oo u bartay booqashada maqaayadaha cuntada lagu cuno. Sidan oo kale, waxay ku noqon karaan waajibaadkooda iyo inay shaqeeyaan sida ugu dhakhsaha badan. Waxay u muuqdaan inay si dhakhso ah wax u cunaan iyagoon si fiican u calalin, taas oo keenta dareen la yaab leh oo dibbiro ah. xitaa adigoon wax badan cunin. Sidoo kale waa wax caadi ah in dadka isticmaala caloosha noocaan ah ay iska dhaafaan cuntada qaar si aysan u jarin heerka shaqadooda.
Sababta kale ee caloosha walbahaarku u jirtaa waa iyada oo la cabo cabitaanno aad u tiro badan oo kafeyn leh, oo ay ku jiraan Coke Xaaladdan oo kale, waxa ugu fiican ee la talin karaa waa in si weyn wax looga beddelo cuntada. Waxaa jira goobo badan oo cuntada degdegga ah laga heli karo oo caafimaad qaba waana beddel faa'iido badan u leh caafimaadka. Fikrad ahaan, waa inaad waqti qaadataa si aad awood ugu yeelatid inaad si fiican u calashado cuntadaada. Haddii aad wax yar socon karto ka hor intaadan shaqada ku laaban wax badan ayaa kuu fiican. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ku laabato shaqada xoog badan oo aad waqtigaaga uga faa'iideysato si wax ku ool ah. Nasashada sidoo kale waa lagama maarmaan in la awoodo in si fiican wax loo qabto.
Noocyada Caloosha: Caloosha
Calooshaani waa mid aad u fudud in la qariyo oo si dhib yar ayaa loogu arkaa isha qaawan. Waxay ku taalaa caloosha hoosteeda waana xaydh yar oo dufan ah. Badanaa wuxuu ku dhacaa haween badan oo wax dhalay ama dadka wax dhalay jimicsi joogto ah laakiin waxay leeyihiin cunno aad u kaladuwan oo keli keli ah. Halkan waxaan kugula talineynaa inaad soo bandhigto xoogag kala duwan iyo jimicsi xoog leh farsamooyinkaaga tababarkaaga caadiga ah. Sidoo kale waa inaad midab siisaa cuntada adigoo soo bandhigaya khudaar badan iyo badeecooyin hodan ku ah fiber. Sidan oo kale, waxaad si dhakhso leh u ogaan doontaa isbeddelada.
Waxay la xiriirtaa noocyada caloosha oo si tartiib tartiib ah u barara maalinta oo dhan. Aroortii waxaad kubilaabaysaa calool yar oo fidsan waxaadna isbedeshaa maalinta oo dhan. Tan waxaa u sababi kara dhibaatooyinka dheef-shiidka, cuntada, ama gaaska ku soo ururay. Waa wax xiiso leh in lagu daro qaar ka mid ah cuntooyinka probiotic ee cuntada, cuntooyinka leh fiyuus aadna u calashaan si aad u wanaagsan. Adeegyada cadaadiska badan ayaa sidoo kale wax badan kaa caawin kara. Booska ayaa lagama maarmaan u ah xakamaynta.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto noocyada caloosha ee kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Noocyada caloosha